Moodel Loo Sameeyay Magaalada Izmir Metro Oo La Ogaaday 6 Milyan Oo Turkish Ah Lira | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYTurkish Aegean35 IzmirMoodel Loo Sameeyay Mitirka Magaalada Izmir wuxuu helay 6 Milyan oo Turkish Liras ah
20 / 01 / 2020 35 Izmir, tareenka, Turkish Aegean, GUUD, KENTİÇİ Systems Rail, Headline, Metro, TURKEY
Qaabka loo sameeyay Izmir Metro wuxuu kasbaday milyan milyan TL
Thanks to Modric Dhaqaalaha iyo Awoodaha Farsamaynta Gawaarida, İzmir Metro waxay badbaadisay 10 milyan oo lira oo koronto ah 6 sano gudahood.
Si loo isticmaalo tamarta si hufan, taas oo ah mid ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee laga baxo nidaamka tareenka, İzmir Metro waxay soo saartay moodel la yiraahdo Saving iyo Farsamaynta Wadista Wax ku oolka ah. Qaabka loo isticmaalay ilaa iyo 2009 wuxuu hoos u dhigay qiimaha tamarta iyadoo ay kordheen tirada rakaabka iyo safarada.
Moodeelka la soo saaray wuxuu bixiyaa kayd aad u badan xaddiga tamarta ku baxday rakaab walba oo la qaado. Qiimaha tamarta ee badbaadiyay kororka tirada rakaabka iyo rakaabka ee metrooga ayaa gaarayay 6 milyan oo Turkish Liras ah.
Sidee ayuu nidaamku u shaqeeyaa?
Si loo maareeyo tamarta loo adeegsado khadka metrooga iyadoo la raacayo nooca Dhaqaalaha iyo Awoodaha Wadaha, qodobbada muhiimka ah waxaa lagu go'aamiyay xariiqda iyo is-dhex-galka socdaallada ayaa lagu hubiyay qodobbadaas. Qodobbadan halka ay tareenadu dib-u-cusboonaysiiyaan bir-qabashada, tamarta laga helo jihada ka soo horjeedda iyo tareenka xawaare ku socda ayaa loo wareejin karaa iyada oo loogu mahadcelinayo nidaamkan, kaas oo salka ku haya mabda'a dib-u-soo-kabashada tamarta ka dhalata. Kororka tirada duullimaadyada ayaa si weyn u kordhiya isticmaalka tamarta iyo xaddiga kaydadka tareennada.
Mashruuca abaalmarinta abaalmarinta
kooxda Izmir Metro Inc. ee khubarada abuuray by nolosha iyo baaxadda qorshaha gunti maray this cusub (cusub) mashaariicda 2015 (KalDer) ka Association Tayada Turkey "Award Achievement" ayaa lagu helay.
Garoonka diyaaradaha ee saddexaad ayaa lagu guuleystay ka hor dhammaystirka
Dalxiiska kalluumeysiga sanadka ee 200 wuxuu midab ku daray dalxiiska
Waxay ku darayaa aragti ah oo casri ah si ay u Trambu gaadiidka gudaha ugu horeysay ee Turkey
TÜDEMSAŞ ayaa laga helay Isticmaalka Sivas (Sawir Sawir)
Gawaarida gaashaanbuurta baabuurta ee Turhal Municipality ayaa badiyay
Isku xirka mareegta Izmir
Moodel Loo Sameeyay Mitirka Magaalada Izmir
Moodhinka Wadista Fudud ee Izmir Metro